कसरी बन्छ ६ किलो सुनसहितको विश्वकप ट्रफी ? (फोटोफिचर) – Satyapati
कसरी बन्छ ६ किलो सुनसहितको विश्वकप ट्रफी ? (फोटोफिचर)
एजेन्सी । इटाली यसपालिको विश्वकपमा छानिएन् । चार पटकको विश्वविजेता इटाली ६० वर्षमा पहिलोपटक विश्वकपमा नपुगेको हो । रसियामा जारी विश्वकपको २१ औं संस्करणमा अहिले इटालीबाट फिफाका केही रेफ्रीसँगै अर्को चिज पनि पुगेको छ त्यो हो विश्वकपको ट्रफी ।
मिलानको नजिकै एउटा सानो सहर पाडेर्नो डुग्नानोमा विश्वकपको ट्रफी बनाइन्छ । यसपालिको विश्वकप ट्रफी पनि त्यहीँ बनेको हो । विश्वकपको अहिलेको ट्रफीको डिजाइन सन् १९७०मा तयार पारिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाबाट कलाकार सिल्भियो गाजानिगाले बनाएको डिजाइन छानिएको थियो ।
विश्वकपको अहिलेको ट्रफीको लम्बाई ३८ सेन्टिमिटर छ भने यसमा ६ किलोभन्दा बढी सुन हुन्छ । ट्रफी विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) को सम्पत्ति हो । हरेक विश्वकप विजेतालाई केही समयका राख्न ट्रफी दिइन्छ । त्यो केही समयपछि फिफालाई फर्काउनु पर्छ । राख्नलाई भने विजेतालाई ट्रफीको कपी बनाइएर दिइन्छ ।
यसरी बनाइन्छ फिफा विश्वकपको ट्रफी (तस्बिरहरु अलजजिराबाट) :